नेपालकै नमुनाः काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल, धनीका छोराछोरीदेखि विदेशी विद्यार्थीसम्मको आकर्षण « Bagmati Online
नेपालकै नमुनाः काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल, धनीका छोराछोरीदेखि विदेशी विद्यार्थीसम्मको आकर्षण
काठमाडौं । काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल शिक्षक क्षेत्रको निकै परिचित नाम हो । छोटो समयमै देशविदेशसम्म चिनिन सफल भएको यो विद्यालय भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको छ । कुल ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा ठूला र सुविधासम्पन्न संरचनासहित निर्माण गरिएको यो आवासीय विद्यालय त्यस्ता अभिभावकहरुलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको हो जो नेपालमा आफूले खोजेअनुसारको विद्यालय नभएर आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन विदेश पठाउन बाध्य हुँदै आएका छन् । कक्षा १ देखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन अध्यापन हुने काठमाडौं वल्ड स्कुल एक विश्वस्तरको विद्यालय हो ।
काठमाडौं वल्ड स्कुलको स्थापनाको मुल उद्देश्य अध्ययनको नाममा जुन ढंगले बर्षेनी ठूलो धनराशी बाहिरिरहेको छ, त्यसलाई न्यून गर्नु हो । विभिन्न अध्ययनहरुले उच्च शिक्षाका लागि मात्रै नभएर विद्यालय तहको अध्ययनका नाममा पनि नेपालबाट अर्बौं रुपियाँमा बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हुने खाने वर्गले लाखौं रुपियाँ तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई विशेषगरी भारतका विभिन्न शहरहरुमा पढ्न पठाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले खोजेजस्तो विद्यालयहरु नभएर विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति मुलुक र अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रो होइन् । यो पुँजीलाई नेपालमै राक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काठमाडौं वल्ड स्कुलको परिकल्पना भएको हो । नेपालमा उच्च गुणस्तर शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था पनि छन् भनेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नमुना बन्न काठमाडौं वल्ड स्कुलको जन्म भएको हो । नेपालमा विश्वस्तरको जनशक्तिहरु उत्पादन गर्न सक्ने शैक्षिक संस्थाहरु पनि छन् भन्ने उदाहरण बनेको काठमाडौं वल्ड स्कुलको पूर्वाधार र सुविधाहरु निकै अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न छन् ।
स्कुलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत शिवराज ओझा भन्छन्, ‘अबको विश्व परिस्थितिअनुसार नेपालले पनि जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी अहिलेको समयमा हाम्रा जनशक्ति त्यहीअनुसार उत्पादन गर्न सकिएन भने मुलुक पछि पर्छ । हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सानैदेखि जग बसाल्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।’ काठमाडौं वल्ड स्कुलको अर्को उद्देश्य भनेको शिक्षामार्फत मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्नु, राजश्वमा वृद्धि गर्नु र नेपालमा विदेशी विद्यार्थीसमेत आएर पढ्नसक्ने शैक्षिक संस्थाहरु छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गरेर देखाउनु हो ।
परिकल्पना तथा लगानीः
काठमाडौं वल्ड स्कुलको परिकल्पनाकार डा. खगेन्द्रप्रसाद ओझा हुन् । उनी एकजना प्रसिद्ध शिक्षासेवी पनि हुन् । त्यस्तै, शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील इ.मिथिलेश झाको संलग्नता छ । व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका थुप्रै शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका कुशल र अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनीहरुले अघि बढाएको यस सोचलाई सार्थक बनाउन चौधरी ग्रुपले साथ दिएको छ । सिजी होल्डिङ्सको ठूलो लगानी रहेको यो परियोजना करिव साढे दुई अर्ब लगानीको हो । जसको अधिकांश पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । आवश्यकताअनुसार अझै लगानी थपिनसक्ने संभावना रहेको छ । शिक्षा र आर्थिक क्षेत्रका पायनियरहरु मिलेर यस परियोजनालाई सार्थक र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी समूहको ‘ब्याकअप’ले गर्दा काठमाडौं वल्ड स्कुलले स्थापनाको छोटो समयमै आफूलाई अग्रणी विद्यालयको रुपमा उभिन सफल भएको स्कुल व्यवस्थापनको विश्वास छ ।
काठमाडौं वल्ड स्कुलको प्रिन्सिपलमा केशरबहादुर दुलाल छन् जो नेपालकै पूरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था बुढानिलकण्ठको प्रिन्सिपलसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । सोही विद्यालयमा अध्ययन गरेर लामो समय अध्यापन गराएपछि उनी बुढानिलकण्ठको प्रिन्सिपल बन्न सफल भएका थिए । शैक्षिक अनुभव र ज्ञानका हिसावले छुट्टै पहिचान बनाउन सफल उनको अनुभव काठमाडौं वल्ड स्कुलका लागि निकै फलदायी हुने देखिन्छ ।
वल्ड कलास र नेशनल क्लासमा भिन्नता
प्रिन्सिपल केशरबहादुर खुलालका अनुसार वल्ड क्लास र नेशनल क्लासमा दुई वटा भिन्नता हुन्छ । एउटा हो करिकुलम अर्थात के पढाइ हुन्छ ? र अर्को हो कसरी पढाइन्छ । नेपालको राष्ट्रिय या स्थानीय तौरतरिका भनेको सरकारले तयार गरेको जुन पाठ्यपुस्तक हुन्छ, त्यसैलाई अक्षरस पढाउने, त्यो कण्ठ गर्ने विद्यार्थी राम्रो भयो भन्ने खालको छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा यस्तो परम्परागत शैलीमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ र केही सुधार पनि भएको छ ।
वल्ड क्लास भन्नेले विश्वका वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवहरुका आधारमा बच्चाको मानसिक विकास कसरी हुनसक्छ ? कसरी उनीहरुले सहजरुपमा धेरै ज्ञान हासिल गर्नसक्छन् ? भन्ने कुराको निष्कर्ष तथा नीतिका आधारमा तयार पारिएको पाठ्यक्रम र सोही अनुसारको अध्यापन शैलीमा पढाउने तौरतरिका हो । यसमा विद्यार्थीहरुमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रष्फुटन गर्न शिक्षकले सघाउँछन् । विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक न्यूनतम् सेवा सुविधा र बाताबरण उपलब्ध गराउने कुरा पनि यससँग जोडिएको हुन्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा मानिसले आफ्नो गाउँठाउँलाई मात्रै नहेरेर विश्व सन्दर्भलाई हेरेर धेरै कुरा सिक्नु र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न सकियो भने मात्रै हामी पनि अरुको गतिमा जानसक्छौं । नभए पछि पछौं । प्रतिस्पर्धी र उन्नत खालको शिक्षा दिने हाम्रो लक्ष्य र चाहना हो ।
कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने सम्वन्धमा नेपालमा अन्योलता रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका हरेक विद्यालयले आफूले गुणस्तरीय शिक्षा दिने दाबी गर्छन् । तर, जनस्तरबाट भने त्यसमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि त्यो शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ ? कसरी संरचनाहरु तयार गरिएको छ ? के कति क्षेत्रफलमा ती संरचनाहरु तयार भएका छ ? पुस्तकालय, खेलकुद मैदान, चमेनागृह, प्रयोगशाला जस्ता कुराहरु छन कि छैनन् ? छन् भने कसरी निर्माण गरिएका भन्ने कुराले अर्थ राख्छ भने अर्कोतर्फ सेवा दिनका लागि दक्ष जनशक्ति । भौतिक पूर्वाधार भएर मात्रै सर्भिस डेलिभरी गर्न सकिएन भने त्यसको अर्थ नहुने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ओझाको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘हार्डवयर र सफ्टवयर दुवैमा हामी सम्पन्न छौं, पूर्वाधार मात्रै भएर हुँदैन् सेवा पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ, यी दुवै कुरामा काठमाडौं वल्ड स्कुल सम्पन्न छ ।’
कस्तो छ सुविधा ?
काठमाडौं वल्ड स्कुल ५५ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । यहाँ विद्यालय आफैले सुविधासम्पन्न संरचनाहरु निर्माण गरेको छ । हरेक कक्षा कोठाहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आकार, सुविधाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक कक्षा कोठामा एसी (एयर कण्डिशन)को व्यवस्था छ । मल्टिमिडियाको माध्यमबाट कक्षा कोठामा पढाइ हुन्छ । विद्यानका विभिन्न विधाका लागि छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरणहरु रहेका छन् । साना बच्चहरुका लागि छुट्टै र ठूलो बच्चाहरुको लागि छुट्टै आईसीटी (कम्यरटर) ल्याब रहेको छ । २४सै घण्टा विद्यार्थीहरुलाई इन्टरनेट सुविधा छ जसबाट विद्यार्थीहरुले इ–लर्निङ आर्फ गर्न सक्छन् ।
साथै, स्कुलले विद्यार्थीको सर्वाङगिण विकासको लागि एक्ट्रा कलिकुलम एक्टिभिटि (ईसीए) र को–करिकुलम एक्टिभिटि (सीसीए)लाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । विद्यार्थीलाई किताव घोकाएर मात्रै पढाउन हुन्न, अहिलेको विश्वबजारलाई बुझ्नसक्ने र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा उनीहरुको चौतर्फी विकासलाई ध्यान दिएको काठमाडौं वल्ड स्कुलले ईसीए र सीसीएलाई जोड दिएको छ । त्यसका लागि करोडौं रुपिया लगानी गरेर भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिएको छ । स्कुलले फुटसल, बास्केटबल, भलिबल, क्रिकेट खेल्ने ठाउँ निर्माण गर्नुका साथै हाफ ओलम्पिक साइजको स्वीमिङ पुलसमेत निर्माण गरेको छ । स्वीमिङ पुलमा साना ठूला सबै विद्यार्थीले स्वीमिङ गर्ने क्षमताको विकास गर्नसक्छन् । यसबाहेक अन्य खेलहरु पनि स्कुलले गर्दै आउनुका साथै विद्यार्थीहरुको बौद्धिक क्षमता बढाउन निबन्ध लेखन, वादविवाद, हाजिरिजवाफ जस्ता प्रतियोगिताहरु पनि गर्दै आएको छ । साथै, आर्ट, म्युजिक क्लास, ड्रामाहरु पनि यहाँ हुने गर्दछ । आर्ट, म्युजिक क्लास, ड्रामाका लागि छुट्टै भवन नै निर्माण भइरहेको छ । स्कुल रहेको क्षेत्र रिसर्चका लागि पनि निकै उपयोगी छ । यहाँ पानीका मुहानदेखि जंगल रहेकाले विज्ञानसम्वन्धी विभिन्न रिसर्चका लागि बाहिर जानुपर्दैन् ।
बाहिर पठाउँदाका चुनौति
शिक्षाका नाममा विदेसिएको ठूलो रकम रोक्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा नेपालमै दिने कुरालाई धेरै अभिभावकहरुले सकारात्मकरुपमा लिएको देखिन्छ । आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउनुपर्दा धेरै अभिभावकहरु खुशी पनि छैनन् । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने संस्था भए आफ्नो छोराछोरी नेपालमै पढाउन हुन्थ्यो भन्ने सोचमा रहेका धेरै अभिभावक काठमाडौं वल्ड स्कुल सञ्चालनमा आएपछि खुशी भएका छन् । बाहिर विद्यार्थी पठाउँदा एकातिर खर्च धेरै हुने अर्कोतर्फ सुरक्षा र संस्कारको चिन्ता हुँदै आएको छ । नेपालमै पढाउँदा आफ्नो रेखदेख र नजर पनि रहने, आनीबानी थाहा हुने, स्वदेशकै स्कुलमा पढ्दा विद्यार्थीका समस्याबारे विद्यालयलाई गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहने भएकाले पनि अभिभावकहरुको ध्यान काठमाडौं वल्ड स्कुलतर्फ तानिएको छ ।
काठमाडौं वल्ड स्कुल शहरको कोलाहल र भीडबाट केही टाढा रहेको छ । र, धेरै टाढा पनि छैन् । स्कुलमा प्रवेश गर्दा सुन्दर शान्त र हरियालीले धेरैलाई मोहित बनाउँछ । शान्त बाताबरणमा अध्ययन गर्दा फरक अनुभव गर्नसक्ने अवस्था छ । चिसो मौसममा घाम लाग्ने पारिलो ठाउँ र गर्मीमा रुखबिरुवाको हरियालीले गर्दा शितलताको महशुस गर्न सकिने काठमाडौं वल्ड स्कुल रहेको ठाउँ धेरै कुराहरु विचार गरेर रोजिएको देखिन्छ । वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ओझा भन्छन्, किन पहिला हाम्रा ऋषिमुनीहरु जंगलमा गएर किन तपस्या गर्थे ? किन ध्यान गर्थे ? किन आफ्ना शिश्यहरुलाई जंगलमै शिक्षा दिन्थे ? निकै अर्थपूर्ण छ । काठमाडौं वल्ड स्कुलले पनि त्यो कुराको अनुभूति गराउँछ ।’
काठमाडौं वल्ड स्कुलको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको यहाँको सुविधासम्पन्न आवास पनि हो । विशेषगरी काठमाडौं बाहिर र विदेशका विद्यार्थीहरु होस्टलमा बसेर अध्ययन गर्नसक्छन् । स्टार–लेवलको यहाँको होटलमा पढ्ने, लेख्ने। सुत्ने सुविधा, स्कुल आफैले राखेका कुकहरुमार्फत क्यान्टिनमा पौष्टिक खाने कुराहरुको व्यवस्था स्कुलमा गरिएको छ ।
काठमाडौं वल्ड स्कुल नेपालका मात्रै नभएर विदेशी विद्यार्थीलाई समेत लक्षित गरेर स्थापना भएको स्कुल हो । यहाँ हाल नेपाली मुलका विभिन्न देशका विदेशी नागरिकका छोराछोरीहरु पनि अध्ययन गर्दै आएका छन् भने समयक्रमसँगै विदेशी नागरिकका छोराछोरीहरु पनि आउन थाल्ने विश्वास ओझाको छ । अरु मुलुकहरुले विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गरेर आफ्नो मुलुकलाई शिक्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गरिरहेको बेला नेपालले पनि अब त्यसतर्फ कदम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काठमाडौं वल्ड स्कुलले विदेशी विद्यार्थी भित्राउन पहल गरिरहेको छ । यसलाई दक्षिण एसियाकै नमुना स्कुलको रुपमा स्थापित गर्ने योजना रहेको छ । source :कर्पोरेट नेपाल
काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल